Nhaka Yakatambidzanwa Kwezvizvarwa Zvinomwe | Nyaya Youpenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maya Myanmar Nahuatl (Central) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nhaka Yakatambidzanwa Kusvikira Kuchizvarwa Chechinomwe
Yakataurwa naKevin Williams
Vanhu vanoti ndakafanana nababa vangu. Ndakafanana navo pachimiro, maziso uye pakusetsa vanhu. Asiwo pane nhaka yavakandisiyira. Nhaka yacho yatambidzanwa kusvikirwa kuchizvarwa chechinomwe chemhuri yedu. Regai nditsanangure kuti inhaka yechii.
Ndichidzidza nezvedzinza redu, ndiina baba vangu
Tateguru wangu Thomas (1) * Williams akaberekwa musi wa20 January 1815, muHorncastle, kuEngland. Papera makore maviri, amai vaThomas vakafa uye iye nevamwe vana vatatu vemumba mavo vakasara vachirerwa nababa vavo, John Williams. John akadzidzisa Thomas basa rekuveza, asi Thomas aida rimwe basa rakasiyana nairoro.
Panguva iyi, vanhu vemuEngland yose vakanga vava kuwedzera kuda kwavaiita zvekunamata. Muparidzi ainzi John Wesley ainge abuda muChurch of England kuti atange boka rainzi Society of Methodists, raikurudzira vanhu kudzidza Bhaibheri vari voga uye kuparidza. Pasina nguva zvaidzidziswa naWesley zvakapararira kwose kwose, uye mhuri yekwaWilliams yakabvuma nemwoyo wose zvaaidzidzisa. Thomas akabatana neboka raWesley akatangawo kuparidza, uye akabva azvipira kuenda kuSouth Pacific semumishinari. Muna July 1840, iye nemudiwa wake Mary, (2) vakasvika kuchitsuwa chekuFiji chinonzi Lakeba, * chaigara vanhu vanodya nyama yevanhu.
KUGARA MUNHARAUNDA YEVANHU VAIDYA NYAMA YEVANHU
Makore avakatanga kusvika muFiji, Thomas naMary vairarama upenyu hwakaoma. Vaishanda kwemaawa akawanda, kuchipisa zvekupisa zviya. Vakaonawo zvinhu zvairovesa hana zvaisanganisira hondo dzemadzinza emo, kudzipwa kwechirikadzi kusvikira dzafa, kuurayiwa kwevana vaduku, uye kudyiwa kwaiitwa nyama yevanhu. Vanhu veko vaiwanzoramba mashoko avaiparidza. Mary nedangwe rake John, vakarwara zvekuti vakapotsa vafa. Muna 1843, Thomas akanyora kuti: “Zvainge zvakandiomera chaizvo. . . . Ndakapererwa.” Kunyange zvakadaro, Thomas naMary vakatsungirira, vachiwana simba kubva pakutenda kwavo muna Jehovha Mwari.
Paiitika zvose izvi, Thomas akanga achitoshandisa unyanzvi hwake kuvaka imba. Ndiyo yakava yekutanga muFiji, kuvakwa nepurani yedzimba dzekuEurope. Uriri hweimba yacho hwainge huri nechepamusoro uye yainge iinewo zvimwe zvakasiyana siyana, zvekuti vanhu vakawanda vemuFiji vaida kunyatsoziva zvayakaita. Imba yacho payakanga yava kutopera, Mary akabereka mwana wake wechipiri, Thomas Whitton (3) Williams, tateguru wangu.
Muna 1843, Thomas1 Williams akabatsira pakushandura Evhangeri yaJohani mumutauro weFijian uye rainge riri basa rakaoma. * Kunyange zvakadaro ainge aine chipo chekugona kuongorora tsika nemagariro evanhu. Akanyora zvaakawana patsvakurudzo dzake mubhuku rake rinonzi Fiji and the Fijians (1858), iro rinonyatsotsanangura zvaiitika munyika yeFiji kumakore ekuma1800.
Pashure pekushanda zvakaoma kwemakore 13 ari muFiji, utano hwaThomas hwakatanga kumunetsa zvekuti iye nemhuri yake vakatamira kuAustralia. Thomas ainge aita nguva refu achiita basa rakaita kuti azivikanwe zvikuru reufundisi, uye akazofira muguta reBallarat, kuVictoria, muna 1891.
AKAWANA PFUMA MUGUTA REKUMAVIRIRA
Muna 1883, Thomas Whitton Williams nemudzimai wake, Phoebe, (4) vakatama pamwe chete nemhuri yavo vachienda kuPerth, guta riri kuWestern Australia. Mwana wavo wechipiri, Arthur Bakewell (5) Williams, uyo akazova mumwe tateguru wangu, aiva nemakore 9 panguva iyi.
Paakanga ava nemakore 22, Arthur akanotsvaga pfuma kuKalgoorlie, guta rakanga richibudirira nekukurumidza, raicherwa goridhe, riri makiromita 600 kumabvazuva kwePerth. Ari ikoko akaverenga mamwe mabhuku akabudiswa neInternational Bible Students, sekuzivikanwa kwaiitwa Zvapupu zvaJehovha panguva iyoyo. Akakumbirawo kuti agare achitumirwa magazini yeZion’s Watch Tower. Afarira zvaainge achiverenga, Arthur akatanga kuudzawo vamwe zvinhu zvitsva zvaainge adzidza pamwe chete nekuita misangano yekudzidza Bhaibheri. Uku ndiko kutanga kwakaita basa reZvapupu zvaJehovha kuWestern Australia kusvikira parava iye zvino.
Arthur aiudzawo mhuri yake zvaakanga achidzidza. Baba vake, Thomas Whitton, vakatsigira Arthur kuti arambe achikurukura neVadzidzi veBhaibheri. Asi pasina nguva baba vake vakabva vafa. Amai vake, Phoebe pamwe chete nehanzvadzi dzake, Violet naMary vakazova Vadzidzi veBhaibheri. Violet akatanga kushanda semuparidzi anoita nguva yakawanda achiparidza, anonzi piyona. Arthur akataura kuti Violet “ndiye aishingaira pakuita basa rekuparidza kupfuura mamwe mapiyona ose muWestern Australia.” Arthur anofanira kunge aiwedzeredza paakataura izvi, asi kushingaira kwaiita Violet kwakabatsira zvikuru chizvarwa chemumhuri yekwaWilliam chakazotevera.
Nekufamba kwenguva Arthur akaroora ndokutamira kuDonnybrook, guta rinorimwa michero riri nechekumaodzanyemba kweWestern Australia. Akapihwa zita remadunhurirwa rekuti “Old Mad 1914!” nekuti aishingaira pakuzivisa vanhu uprofita hweBhaibheri hunotaura nezvegore iroro. * Kutsvinyirwa uku kwakapera pakatanga Hondo Yenyika I. Arthur aigara achiparidza kuvanhu vaiuya kuzotenga muchitoro chake, uye ainge akaisa mabhuku anotsanangura Bhaibheri pahwindo rechitoro ichi. Arthur airamba zvakasimba dzidziso yeUtatu nekuti haiwanike muBhaibheri. Akatoisa pahwindo rechitoro chake chikwangwani chairatidza kuti munhu aizokwanisa kumutsanangurira kuti dzidziso yeUtatu ndeyechokwadi aizopihwa 100 pounds (US$150). Hapana akambokwanisa kutora mari iyi.
Pamba pake ndipo paiungana boka revanhu richidzidza Bhaibheri uye ndipo paiitirwa misangano yeungano muDonnybrook. Nekufamba kwenguva, Arthur akavaka muguta Imba yeUmambo, kana kuti yekuitira misangano yekunamata. Imba iyi ndeimwe yedzakatanga kuvakwa muWestern Australia. Kunyange paakanga ava kusvitsa makore 80, aipfeka sutu yake netai, otasva bhiza rake rainge rakurawo rainzi Doll, oenda kunoparidza kwose kwose mudunhu reDonnybrook.
Vana vaArthur vakakurudzirwa nezvaiitwa naBaba vavo, avo vainge vakanyarara asi vari murume anoremekedzeka uye anoshanda nesimba. Mwanasikana wavo Florence (6) akava mumishinari kuIndia. Vanakomana vavo, Arthur Lindsay (7) naThomas, vakatevedzera muenzaniso wababa vavo, uye vakashumira kwenguva yakareba sevakuru veungano.
Arthur Lindsay Williams, tateguru wangu, aizivikanwa uye aifarirwa nekuti aiva netsitsi. Aizvipa nguva yekutaura nevanhu uye aivaremekedza. Aivawo shasha mumakwikwi ekutema miti, uye mumakore 12 akahwina ka18 pamakwikwi aya.
Saka Arthur, haana kushamiswa mwanakomana wake aiva nemakore maviri, Ronald (8) (sekuru vangu), paakatora demo ndokunanga kukamuti kemuapuro kaiva pedyo nemba yedu. Amai vaRonald vakabva vasunga zvakanakanaka paainge atema, uye muti iwoyo wakazobereka maapuro ainaka zvekuti dhu. Maapuro aya akapiwa zita remadunhurirwa rekuti maLady Williams, runova rudzi rwemaapuro akazoshandiswa kubudisa rumwe rudzi rwemaapuro anonzi Cripps Pink. Mhando yemaapuro aya inoverengwawo pamhando dzakasiyana-siyana dzinonyanya kuzivikanwa munyika yose.
Ronald, kana kuti Sekuru, sekumudana kwandaimuita, akazofarira zvekuvaka chaizvo. Iye naambuya vangu vakaita makore akawanda vachizvipira kushanda pakuvaka zvivako zveZvapupu muAustralia nekuSolomon Islands. Iye zvino Ronald ava kuda kusvitsa makore 80, asi achiri kushumira semukuru weungano uye ari kubatsira pakuvaka nekugadziridza Dzimba dzoUmambo dzemuWestern Australia.
KUKOSHESA NHAKA YANDAKASIYIRWA
Vachitevedzera zvaiitwa nevamwe vemudzinza redu, vabereki vangu, Geoffrey (9) naJanice (10) Williams, vakashanda nesimba pakundirera pamwe chete nehanzvadzi yangu Katharine (11) kuti tikure tichikoshesa mararamiro anofanira kuita vaKristu. Ndava nemakore 13, ini pachangu ndakasimbisa ushamwari hwangu naJehovha. Pandakanga ndiri pagungano reZvapupu, ndakanzwa John E. Barr, mumwe weDare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha achikurudzira vechiduku vaiva muvateereri kuti: “Musatambisa mukana wakanaka wamuinawo wekuti muzive uye mude Jehovha.” Manheru emusi iwoyo ndakabva ndatsaurira upenyu hwangu kuna Jehovha. Pashure pemakore maviri ndakatanga kupayona.
Iye zvino, ini (12) nemudzimai wangu Chloe, tiri kunakidzwa nekushandisa nguva yedu zhinji pakuparidza muTom Price, guta duku riri kure nemamwe, nechekumavirira kweWestern Australia. Tinoshandawo kwenguva shoma kuti tizviriritire. Vabereki vangu nehanzvadzi yangu Katharine, pamwe chete nemurume wake, Andrew, vari kupayona kuPort Hedland, guta riri makiromita anenge 420 takananga kuchamhembe. Ini nababa vangu tinoshumira sevakuru muungano.
Tikaverenga zvizvarwa 7 zvakapfuura zvedzinza rangu, tinosvika pana Thomas Williams tateguru wangu, uyo akasarudza kushumira Jehovha Mwari. Nhaka iyoyo yekutenda uye yekunamata yakasvikawo kwandiri. Ndinonyatsonzwa kuti ndakakomborerwa kuva nenhaka yakadai yandakasiyirwa yekunamata.
^ ndima 5 Manhamba anoenderana neari pamifananidzo yevanhu inotevera.
^ ndima 6 Chitsuwa chaimbonzi Lakemba, chiri nechekumabvazuva kweFiji munharaunda yezvitsuwa inonzi Lau Group.
^ ndima 10 Mumishinari ainzi John Hunt ndiye akashandura zvakawanda muTestamende Itsva yeBhaibheri rechiFijian, iro rakabudiswa muna 1847. Chinhu chikuru paBhaibheri iroro ndechekuti rine zita raMwari rekuti “Jiova,” pana Mako 12:36, Ruka 20:42, uye Mabasa 2:34.
^ ndima 16 Ona mashoko ekuwedzera akanzi “1914—Gore Rinokosha Muuprofita hweBhaibheri” ari mubhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha. Rinowanikawo pawww.jw.org.
Uprofita hwenguva nomwe huri muna Dhanieri chitsauko 4 hunotaura nezvekuguma kweutongi hwevanhu.